Wepamusoro 5 Cloud Mapuratifomu uye Mhinduro dzekusarudza Kubva - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
AWS, Azure, Cloud mhinduro, Google Cloud Platform, IBM, Microsoft, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Wepamusoro 5 Cloud Platform uye Mhinduro dzeKusarudza Kubva
Cloud services uye mapuratifomu ari musika unokurumidza kukura. Mazuva ano matekinoroji senge yakakura data analytics, IoT, chakagadzirwa njere uye kunyange webhu uye nharembozha yekubatira zvese zvinoda rinorema komputa simba. Cloud computing uye gore mapuratifomu anopa emabhizinesi imwe nzira yekuvaka yavo-imba zvigadzirwa. With gore kadambari, chero munhu anoshandisa internet anogona kunakidzwa ne scalable komputa simba pane plug uye play hwaro. Sezvo izvi zvichiponesa masangano kubva mukuda kwekudyara nekuchengetedza zvivakwa zvinodhura, yave mhinduro inozivikanwa kwazvo. Kune makambani mazhinji anopa gore mapuratifomu ekuvandudza, manejimendi, uye kutumirwa kwekushandisa. Mune ino blog, isu tinokuzivisa iwe iyo pamusoro 5 gore mapuratifomu aunogona kushandisa kunyatsogadzirisa izvo IT zvido zvesangano rako.
Amazon Web Services (AWS) inotsigira ye Amazon (a leading company in eCommerce). Under the umbrella term of AWS, Amazon provides on-demand gore kadambari platforms like storage, data analysis, etc. With a whopping 35% share share, Amazon inopa mabasa ayo kune vanhu, makambani, uye hurumende. Amazon Web Services inobvumidza vanyori vavo kunakidzwa nesumbu rakazara remakomputa, chero nguva, zvichibva pane zvavanoda. Iyo yese sevhisi inogoneswa kuburikidza neinternet.
Pakati pevapi vese vanopa gore Amazon inofungidzirwa ndiyo mhinduro ine simba kwazvo uye inochinja. AWS's chairo gore chikuva inouya neakawanda ehunhu hwekombuta chaiyo inosanganisira Hardware (CPU (s) & GPU (s) yekugadzirisa, hard-disk / SSD yekuchengetedza & yemuno / RAM yekurangarira); an operating system to choose from and pre-loaded apps like web web, database, CRM, nezvimwewo. Muchokwadi, ikozvino unogona kuwana akasiyana AWS Certification inopihwa neAmazon kuratidza kushamisika kwako uye kuramba uchidzidza kusvikira iwe wanyatsoziva sevhisi sevhisi.
Read More: Amazon DynamoDB vs MongoDB
2. Google Cloud Platform:
Google offers its public gore kadambari solutions with the name of Google Cloud Platform, kana GCP. Inopa masevhisi mumativi ese makuru anosanganisira komputa, networking, kuchengetedza, machine learning (ML) uye iyo Indaneti zvinhu (IoT). Izvo zvinosanganisirawo zvishandiso zvegore manejimendi, chengetedzo, uye budiriro. Iyo Google Cloud Kuchengetera inesimba ine simba yekuchengetedza mhinduro inotsigira zvese SQL (Cloud SQL) uye NoSQL (Cloud Datastore) dura rekuchengetedza.
Iyo Google Compute Injini (Zvivakwa seSevhisi, kana IaaS) inopa vashandisi vane chaiwo mamashini zviitiko zvebasa rekutapa. Iyo Google App Injini (Platform seSevhisi, kana PaaS) inopa vanogadzira masoftware kuwana kune yeGoogle pane-inoda kubatwa uye software yekuvandudza kit (SDK) yekuvandudza mashandiro anomhanya pane app injini. Ese aya masevhisi anogona kuwanikwa uchishandisa yeruzhinji internet kana kuburikidza neakatsaurwa manetwork.
Google Cloud Platform kana GCP ndiyo imba yeKubernetes. Kubernetes yakagadzirwa neGoogle muna2014 senge yakavhurwa sosi. Google Kubernetes Injini kana GKE inopa vashandisi nharaunda yakachengetedzwa yekutumirwa, manejimendi, uye kuyerwa kwezvishandiso zvine container nerubatsiro rweGoogle zvivakwa.
3. Microsoft Azure:
Microsoft Azure (formerly Windows Azure) is the gore kadambari service from Microsoft. Enabled primarily through Microsoft-managed data centers, this service proves to be a reliable solution, especially for Microsoft evangelists. Like the above solutions, it supports the development, test, deployment, and management of applications and services. For dandemutande budiriro, inopa rutsigiro rwe PHP, ASP.net, uye Node.js.
Iyo Windows Azure inoshandiswa kuendesa kodhi pane maseva eMicrosoft. Iyi kodhi inobata mukana kune zvekuchengetedza zviwanikwa zvemuno (mablobs, mitsetse, uye matafura). Ipo iyo SQL Azure isiri yakazara SQL Server semuenzaniso inogona kusanganiswa neSQL Server. Iyo yekuchengetedza maficha senge yechokwadi, chengetedzo, nezvimwe zvinotsigirwa uchishandisa Azure AppFabric iyo inobvumidza kunyorera mukati meLAN yako kutaurirana neAzure gore. Pakazara iyo yakazara package inotsigira kusimudzira, manejimendi pamwe nekuchengetedzeka kwekushandisa.
Read More: AWS vs Azure vs GCP
DigitalOcean iAmerican cloud hosting company iyo yakatanga server yayo yekutanga muna 2011. Iyo diki yekutanga-kumusoro kubva kuNew York City, New York yauya nzira refu kubva 2011 necustomer base yevanopfuura hafu yemiriyoni vanogadzira.
DigitalOcean yakasundira pfungwa yekushandisa Solid State Drive (SSD) kugadzira chikuva-chinoshamwaridzika chikuva chinotendera VATengi vatengi kuchinjisa mapurojekiti uye kuwedzera kugadzirwa zviri nyore uye zvine mutsindo. VABATI vemabhizimusi vatengi vanogona kuwedzera zvinobatsira zveyero nekuita mapurojekiti kune akawanda mapuratifomu pasina kunetseka nezvekuita.
Aesthetically Inofadza & Intuitive UI - Manage scalable web applications ne-one-click apps inobvumira kushandiswa uye nyore kusanganiswa ne3rd zvishandiso zvepati.
Kuita Kunoshamisa - Mumwe wevatanga kupa veSSD-based virtual michina. Iwo 'Madonhwe' anopihwa neDI ane mwenje unokurumidza kuwedzera nguva.
Yakawandisa Zvinyorwa - Gwaro rinofukidza zvese zvinogona kutadzisa mugadziri kubva kumisikidza LAMP stack kuendesa Kubernetes masumbu.
Pocket-Yehukama Mitengo - DhijitariOcean zvirongwa zvinotanga pamadhora mashanu pamwedzi nesarudzo dzekuwedzera dzesarudzo yeawa uye yemwedzi yekubhadhara.
5. IBM Bluemix:
IBM Bluemix ndiro gore kadambari solution from IBM that comes with the platform (PaaS) as well as infrastructure as a service (IaaS) offerings. With Bluemix IaaS, users can deploy and access virtualized compute power, storage and networking using the internet. The IBM service offerings can be used as a public, private or hybrid model whichever suits an organization’s need.
Iyo IBM Bluemix PaaS yakavakirwa pane yakavhurwa sosi gore chikuva - Cloud Foundry. IBM masevhisi anogona kushandiswa nevagadziri kugadzira, kubata, kumhanya uye kuendesa zvinokanganisa maficha kune ese veruzhinji gore uye pane-nzvimbo nharaunda. Iyo mitauro yekuronga iyo inotsigirwa neIBM Bluemix inosanganisira Java, Node.js, PHP, uye Python. Mhinduro yacho inogona kutowedzerwa kutsigira mimwe mitauro.
Read More: Kuita Sentiment Kuongorora neBM Bluemix
Alibaba Cloud ndiko kuita kwegore kweChinese eCommerce hofori - Alibaba Boka. Iwo maAlibaba masevhisi anotonga musika weChinese uye ane midzi pasirese pasirese aine dzimbahwe muHangzhou, China. Iyo yakavambwa mu2009, makore matatu chete mushure mekubatanidzwa kweAmazon Web Services. Kuva mubhizinesi rimwe chete seAmazon inowanzoonekwa seanokwikwidza akaomesesa weAWS.
Alibaba Cloud began as a private cloud which was meant to support the internal infrastructural needs of the Alibaba Group but it soon scaled to a public cloud solution provider. The Alibaba Cloud computing services cover all the major cloud services like elastic computing, hosting, object storage, relational database (SQL), NoSQL database (using the Table Store), yakakura data analytics (Hadoop), Machine Learning (ML) uye chakagadzirwa Intelligence (AI).
Kune anovandudza kana mumwe munhu anoziva nzira yavo kutenderera tekinoroji zvinoita sekunge hapana chinokurumidza kana kuita zvirinani pane DigitalOcean. ZVAKAITA zvaburitsa pachena kuti kunyangwe nyowani mutsva mumunda anogona kubuda mutungamiri wemusika.
Kana iwe uchitsvaga yakakwira yekuita inomiririra iyo inogara nyore muhomwe, DhijitariOcean ndiyo sarudzo yako.
Kana iwe uchitsvaga yakakodzera yakawanda makore mhinduro kune zvinodiwa nebhizinesi rako saka inzwa wakasununguka kutibata nesu. Iine hunyanzvi hwakadzama mukutonga kwegore nekusimudzira, data hombe uye machine learning, tinogona kupa mhinduro yakakodzera kune zvaunoda uye kukubatsira wakachengeteka kuenda kumakore.
Animaker Inc: Iyo Yakanakisa Mhuka Software yeVatangi